MAMPITANDRINA ANAREO MIARAMILA IZAHAY – MyDago.com aime Madagascar
MAMPITANDRINA ANAREO MIARAMILA IZAHAY
Nitoy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny movansy Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny lahateny maro samihafa nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Ny solontenan’ny RCM tonton Georges dia nanambara fa mivadibadika be ny raharaham-pirenena eto amintsika. Efa mandeha sahady hoy izy any ambanivohitra any ny hoe : izay tsy tianareo amin’ny kandidà dia ataovy « croix », ny dikan’izany dia tokony hifanohittra amin’izany no ataony. Ranenifara kosa dia nilaza fa ny zava-niseho teny Andavamamba ireny dia manaporofo fa tany tsy misy fanjakana eto amintsika. Nasehon’ireo tsy matahotra miaramila hoy izy fa matanjaka izy. Mahakasika ny fialan-dRajoelina dia nambarany fa sahiano ve ny milaza fa tsy hiala ianao nefa filohan’ny tetezamita. Ny Ct Feno dia nanambara fa n’inon’inona fandrobana ny fananan’ny filoha Ravalomanana dia volamena latsaka ambovo izy. Na eny an-dalambe na eny amin’ny gazety hoy izy dia tsy misy halan’ny vahoaka afa tsy Rajoelina. Ny Cst Henri dia nilaza fa tsy avelan’ny Dolin hivoriana ao Anosy kely nefa fivorian’ny parlemantera. Misy an’izany Plan B izany hoy izy ary misy ihany koa mikonokonina amin’ny Plan A. Ny plan B dia milaza hoe tsy maintsy atao ny fifidianana amin’ny 24 jolay. Ny Ct Hilarion dia nilaza fa misy miaramila mivorivory any. Raha tan-dalàna hoy izy ny miaramila dia hajao ny lalàna avoakan’ny CES. Amin’izao fotoana izao hoy Hilarion dia mis tetika ataon’ny miaramila hoe ho samborina Rajoelina, Ratsiraka dia alefa eny Tsiafahy, ary Ramatoa Lalao Ravalomanana dia averina any Afrika Atsimo. Noho izany hoy izy dia mampitandrina anareo miaramila izahay, fa raha sahy ianareo dia ataovy izany. Tandremonareo miaramila tsy hifamono eto ny Malagasy. N’inon’inona hoy Hilarion dia I Neny no kandidà hifampitana aminy amin’ny 24 jolay dia matahotra izy.
Guy Maxime Ralaiseheno : mampitandrina izahay, hifampitady raha samborina eo Ralitera !
7 pensées sur “MAMPITANDRINA ANAREO MIARAMILA IZAHAY”
» Marie dit :
Mba lazao kely hoe ny fahitanareo izay hevitra izay ? »
Toa lasa resaka NANIDINA fotsiny ity izy, raha tsy hoe……HIFOHA sy MBA HANDINIKA
NY MOMBA IO…….ANGAMBA………. 😉 ny ……..TIM sy GTT ?????
FA FANONTANIANA FOTSINY NY AHY ! BETSAKA mantsy ny fanontaniana.
Fa inona no tokony hidirana@’izay hanOvany an’i Domelina sy Deba any aloha???
fa iza no hanao izany eo raha tsy ireo akamany voafitany ireo ihany, ka zatra lalan-dririnina
domelina koa izao izy handroso…….hiemotra……….F’ angaha moa mitetika ny ho afa-main ity ilaikely hono???
Izay hifanosehany any fa tsy tokony ho resahana eo akory izany fa angah mora ny nataony an’i Charles???
mandrora mitsilany ireny .
Marina ny voalazanao Marie , efa manao izahay saingy tsy mahenika ny tanana , fa tsy kivy fa dia atao foana e! manao taratasy izahay entinay manazava ny zava-misy ohatra satria vitsy ny olona no mahatakatra ny zava-misy , mihezaka koa miresaka amin’ny manodidina, fa ny kosa aloha ilay manakiana ny mpitarika indray dia tsy voako loatra, izay no mba hataoko e!
Efa tena hezaka be izany ataonareo izany Vinifanja a ! Soa ihany mba misy olona mirotsaka toy izany.
Ny fanakianana aloha dia efa tandra vadi-koditra amin’ny saina teren’ny fahantrana ka ho sarotra mihitsy vao afaka izany e!
Momba ny fandehan’ny raharaha « Demission » indray, asa izay eritreritrao fa ny CES sy ny Miaramila mityolona ho an’ny ARA-DALANA sisa no afaka hamaha ny olana. Fa raha toy izao foana kosa no ataon’ny CES dia tsy ho afa-bela isika.
Ny mairamila « mpanohana ny HAT no mbola ianteheran’i Rajoelina ao.
Raha 60 jours izany anie no fetra hialan’ny FAT ao, efa tokony hiala daholo izany izy ireo e ! Izaho angamba no tsy maharaka ?
Manomboka manadombo ny CES koa ny Ministry ny Ati-tany, fa ireo no milefitra sy tsy mahatana ny ADIDINY, dia tsotra kokoa ny tsy fisiany. Izany moa dia milaza fa olona tokony ho MAHAFANTATRA TSARA ny Lalàna no membre ao.Enga anie !
Amiko aloha dia ireo no mety ho fanafodiny e : ny miaramila sy ny CES. Nefa ity voalohany nilaza fa tsy hiditra instony amin’ny Politika anefa………
Raha misy hifanampiana momba ny fanaovana « affiches » ry Vonifanja dia efa hainao sy hitanao ny làlana andefasna vaovao na filazàna a! Vonona ihany koa ny aty ka !
Marie,Misaotra mialoha e! ianao ve mpakao amin’ny Magro ? raha CES indray dia ny anarana fotsiny no miova fa ny mpikambana dia ireo HCC ihany , ka tsy mahagaga fa momban-dRajoelina foana ireo na mainty ary lasa fotsy , izaho aloha mbola tsy nahita na nandre hoe misy miaramila momban’ny ara-dalana e! afa tsy ireny teny amin’ny Bani ireny , nefa ireny efa nigadra ka eo no olana , izaho tsy hiteny hoe tapi-dalankaleha isika hamahana izao krizy izao , io tsy maintsy mivaha io na dia tsy manana miaramila aza isika , fa miandry kely fa efa manomboka hita mantsy izao ilay hery fa ny fampitambarana azy sisa no hitadiavana hevitra , ary zavatra tonga dia mahafoaka be no atao ary indray mipoaka izay no jerena.
Manongo tena mihitsy aho ry Vonifanja ! Mifona aho fa izaho ihany anie no Marie -Njara – N ….sy ny sisasy ny sisa ! Mino aho fa fantatrao tsara izany o ??? 😉
Efa amro ny miaramila no manatona ny ara-dalàna ka ! saingy tsy hafa-mihetsika satria tsy omen’ny miaramilan’i Rajoelina fiadiana.
Manomboka amin’i Jeneraly Ratrimoarivony dia efa misy Officiers mampioseho mazava ny tsy fiarahany amin’i PHAT intsony.
Ny Sous Officiers moa dia efa ela no mijaly satria sady tsy mandray karama ara-dalàna no diso anjara tamin’ny toky nomen’i Rajoelina tao aorian’ny Fikomiana 2009.
Msy gazety nilaza vao tsy ela fa 2 semaines angamba izay, fa METY (conditionnel) hifampitifitra ny miaramila. Milaza izany fa ao raha. Sa ????
Tena marina ny teninao fa ny FAMPITAMBARANA no tena olana. Tsy hanisy resaka be momba io aho aloha izao, fa dia apetraka foana ny faniriana amin’ny nolazain’i Neny hoe :
» La solidarité est une chose importante « ….!
Saika adino : lainga be izany hoe aty Dago izany aho ry Vonifanja a ! mbola mifona ihany e ! Tsy mpandaiga aho re fa mba miseho ho …..e !
Précédent Article précédent : REPORT OF THE PEACE AND SECURITY COUNCIL ON ITS ACTIVITIES AND THE STATE OF PEACE AND SECURITY IN AFRICA
Suivant Article suivant : Mamy Rakotoarivelo : « tsy mitombina ny antony tsy azo hanoharana nataon’ny CES »